मातृभुमि छोडेर विदेश आउने उल्टै देश सङ्ग मागेर बस्ने ?NRN को काम लिने हैन दिने हो : सुनिल खड्का - HimalayaMail.com
Home » मुख्य समाचार » Uncategorized » मातृभुमि छोडेर विदेश आउने उल्टै देश सङ्ग मागेर बस्ने ?NRN को काम लिने हैन दिने हो : सुनिल खड्का
मातृभुमि छोडेर विदेश आउने उल्टै देश सङ्ग मागेर बस्ने ?NRN को काम लिने हैन दिने हो : सुनिल खड्का
In Uncategorized, यूके समाचार
- Updated 20/07/20191:53 pm
बेलायतमा एनआरएन यूकेको चुनावी सरगर्मी क्रमशः बढ्दै गएको छ । सेप्टेम्बर १४ मा हुने निर्वाचनमा विभिन्न पदका प्रत्यासीले आफ्नो आकांक्षा सार्वजनिक गर्ने लहर नै छ । यसैक्रममा एनआरएन अभियन्ता , समाज सेवी तथा एक सफल उद्यमी सुनिल खड्का आफ्ना चुनावी एजेण्डाहरु सार्वजनिक गर्दै उपाध्यक्ष पदमा आफ्नो उमेद्वारी घोषणा गरेका छन् । खड्का ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सदस्य, गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेको सल्लाहकार र परोपकार समितिको सदस्य सचिव र क्याट यूकेको उपाध्यक्ष समेत रहेका छन् । सफल व्यवसायीको रुपमा परिचित खड्का सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय रहँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ गैर आवासीय नेपाली अभियान सम्बन्धमा उनीसंग पत्रकार जगन कार्कीले गरेका कुराकानी
म विगत १८ वर्ष देखी वेलायतमा सकृय छु । विगतका दिन आफ्नो व्यक्तिग जीवनको सेटलमेन्टमै गए । अवका बाँकी दिन सकृय रुपमा समाजसेवामा लाग्ने प्रण गरेको छु । यस्तै म एक व्यवसायी पनि भएको हुनाले गैरआवासीय नेपाली संघ व्यवसायसंग पनि जोडिएको संस्था हो । यो संस्थामा लागेर परोपकार र नेपालमा लागानीको क्षेत्रमा केही गर्ने तिब्र इच्छा शक्तिका साथ उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको छु ।
समाज सेवा कि आफ्नो पहिचान स्थापित् गर्नको लागि ?
एउटा स्थापित व्यवसायीलाई व्यवसायले नै आफ्नो परिचय दिएको हुन्छ । त्यसको लागि गैरआवासीय नेपाली संघलाई माध्यम बनाउन आवश्यक पर्दैन् । म संस्थागत रुपमा केही गरौं भन्ने पवित्र भावना लिएर एनआरएनएमा आउन खोजेको हो । मेरो परोपकार प्रतिको प्रतिबद्धता माथि शंका नगर्न आग्रह गर्दछु ।
गैरआवासीय नेपाली संघमा के सुधार गर्न चाहानु हुन्छ ?
संघको मुख्य उदेश्य नेपालको समृद्धीनै हो । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले देशको लागि केही गरौं भन्ने भावना सहित नेपालको लागि नेपाली भन्ने नारा सहित यो अभियान शुरु भएको हो । त्यसैले संघका भावि योजना सबै नेपाल केन्द्रि हुनु पर्छ त्यो पनि लगानीको माध्य बाटै नेपालको समृद्धी सम्भवन छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।
तपाइलाई जिताउनु पर्ने कारण के हुन् ?
समाजमा केही गर्छु भनेर तिब्र इच्छा लिएरआएको व्यक्तिलाई समाजले नजिताउला भन्ने कुरामा म शंका गर्दिन् । समाजले काम गर्ने चाहानेहरुको लागि मार्ग प्रसस्त गर्दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
चुनाव जित्नु भयो भने के के गर्नु हुन्छ ?
मैले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो । उपाध्यक्षमा जिते भने संघको विधानले उपाध्यक्षको लागि र्निदिष्ट गरेको रोल एण्ड रेस्पोसिविलिटी छन् त्यसलाई पालना गर्ने हो । संघको नेतृत्व अध्यक्षले गर्ने हो । उपाध्यक्षले कार्यसमितिले गरेको निर्णयहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मुद्धाविहीन भएको भन्ने सुनिन्छ नी ?
संघको स्थापनाकाल देखी उठाएका अधिकांस मुद्धाहरु सम्वोधन भएको अवस्था हो । नागरिकताको विषय कार्यन्वन हुने चरणमा छ । मातृभुमि छोडेर प्रवासमामा आउने अनि उल्टै देश सङ्ग मागेर बस्ने ? अव एनआरएनएले राज्यसंग माग्ने दिन सकिएसके सम्म बाचुन्जिेल देशको लागि केही गरेर मर्ने हो । यो अभियानले हाम्रा सन्ततीहरुलाई नेपालसंग जोड्ने ग्यारेन्टी नगरेर सम्म मुद्धा सकिदैन् ।
Previous Post एन आर एन युकेको अध्यक्ष पदका लागि ललित नेउपानेको उम्मेदबारी घोषणा आज हुने
Next Post चार हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाको अध्ययन सकिँदै
सामुदायिक विद्यालयका ५ हजार दरबन्दी मिलान
12/12/201900 CommentsBy: himalayamail
काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक संख्या समायोजन गर्ने भएको छ । आगामी शैक्षिक सत्र शुरु
12/12/201920 CommentsBy: himalayamail
काठमाडौं । भोलि बिहीबार किरात समुदायको उधौली पर्व, नेवार समुदायको योमरी पुन्ही पर्छ । धेरै भित्तेपात्रोहरुमा यो दिनलाई रातो
काठमाडौं । मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज याक्खाको चासुवा, सुनुवारको फोलस्यादर, राईको उधौली सकेला र लिम्बुहरूको चासोक तङनाम धुमधामसँग